Igodo 4 iji mee ka usoro ihe nlere nke vidio bulie gi nke oma | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 20, 2014 Douglas Karr
Anyị ekekọrịtala nnukwu infographic na Ntuziaka maka usoro ntanetị, ugbu a, lee nnukwu ozi sitere na Media Octopus na aro maka itinye ego vidiyo na-elekọta mmadụ maka akara gị.
Enwebeghị oge ka mma maka akara iji tinye ego na ịmepụta ma kesaa ọdịnaya nke na-eme ka ndị mmadụ na-achị ọchị n'olu dara ụda, na-atụ anya na atụmanya ma ọ bụ na-eche ntutu dị n'azụ olu ha na-akwụsị. Olly Smith, Onye Nchịkwa Azụmaahịa maka EMEA, Usoro mgbasa ozi na-enweghị isi
Nke a bụ akara ngosi 4 dị ukwuu iji mepụta gị online video atụmatụ:
Ghọta ndị na-ege gị ntị - vidio gị ga-abụ ihe na-atọ ụtọ, nnabata na ihe mmụta iji dọrọ uche. Nkọwapụta ndị na-ege gị ntị iji hụ na ị nyere ọdịnaya ha na-achọ.
Mepụta ọdịnaya - kedu ka ị ga - esi jide ha? Mee ka ha nwee mmetụta uche, nke ziri ezi, na-akpali akpali, ma gosipụta akara ngosi gị.
Jikwaa nkesa - vidio abaghị uru ma ọ bụrụ na ọ nweghị onye ga-ele ya. Kekọrịta ya n'etiti ọha na eze ma kwalite ya iji hụ na ị rutere ndị na-ege gị ntị. Na-ebuli vidiyo gị maka ọchụchọ dị ka nke ọma!
Tụọ ma kwupụta ihe ịga nke ọma - olee otu ị ga-esi tụọ ihe ịga nke ọma nke vidiyo gị? Olileanya na ị nwere oku ime ihe na njedebe nke na-ezo aka na peeji nke ọdịda ebe ị nwere ike ịlele mgbanwe.
Tags: Vidio Ahịavideo vidioelekọta mmadụ videoelekọta mmadụ video maka azụmahịaoctopus nke mgbasa oziusoro mgbasa ozi vidiyo